Tao Anatin’ireo Faharavàn’ny “Tanàna Haolo” Ao Abkhazia Atsinanana, Mitohy ny Fiainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2017 23:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, Deutsch, русский, English
Sary an'i Dmitry Stateynov ho an'ny Media OC. Fampiasàna nahazoana alalàna
DADA Dikan-dahatsoratra mpiara-miasa iray nosoratan'i Dmitri Stateynov ity manaraka ity, izay navoaka voalohany tamin'ny OC Media
Ela loatra vao tonga ao Abkhazia atsinanana ny fiarenana taorian'ny ady, indrindra indrindra tao amin'ny distrikan'i Tkuarchal. 20 taona mahery teo no dila nifaranan'ny ady amin'ny fomba ofisialy nifanaovan'i Zoerziana sy Abkhaz, saingy ireo holatra navelany mbola milentia lalina be ao amin'io faritry ny repoblika io.
Manome sary mandòna ireo tanàna haolo ery ambony ao amin'ny distrikan'i Tkuarchal. Ireo tanàna toa an'i Dzhantukha, Akarmara, Pyataya Shakhta, Polyana, ary Kharchilava dia miorina ao anaty tavy misy arintany ao Abkhazia.
Nandritra ny vanimpotoana sovietika, foko maro samihafa no nonina sy niaraka niasa teo an-toerana; Rosiana, Grika, Abkhaz, Zeorziana ary Amerikana. Maro tamin'izy ireo no nandao ny fonenany nandritra ny ady. Ankehitriny, Rosiana sy Abkhaz no ankamaroan'ireo monina eto.
Fantatra ho toy ny “tanàna haolo” ireo fivangongoana ireo ao Abkhazia . Raha toa nahatratra 10.000 ny isan'ireo mponina tao aminy talohan'ny ady, ankehitriny dia tsy misy afatsy anjatony vitsy monja sisa no monina any amin'izy ireny.
Famantarana ity tranga ao Tkuarchal ity. Toy ny tamin'ny taona 2011, 16.000 no isan'ireo mponina rehetra tao amin'ilay distrika, zara raha nitsangan-ko velona tao anatin'ny folo taona mahery. Tamin'ny taona 1989, olona teo amin'ny 43.000 teo no nonina tao amin'ilay distrika.
‘Vokatry ny ady avokoa izao rehetra izao ‘
Ireo rihana dimy foana an'ilay trano efa tamin'ny vanim-potoana sovietika tany amin'ny taona 1960 — Khrushchyovkas — dia mijoro ho toy ireo marika tamin'ny firodanana sy faharavàn'ilay faritra. Nianjera ireo trano lehibe ary mahalana no misy fianakaviana maherin'ny roa mipetraka ao aminy.
Teo amin'ny fidirana ny tanànan'i Dzhantukha, nifanena tamina olona monina eo an-toerana aho, lehilahy zokiolona iray. Nanomboka resaka iray izy izay tsy tiany ho faranana.
“Vokatry ny ady avokoa izao rehetra izao.”
“Afaka miresaka aminao ve aho?”
“Hiresaka ahoana? Efa mazava daholo ny zavatra rehetra.”
Talohan'ny ady, navitribitrika ny fiainana tao an-tanàna, niaraka tamin'ireo tranom-pokonolona, ireo sekoly ary ireo akanin-jaza rehetra samy niasa ho an'ny fiaraha-monina.
Ankehitriny, voatemitra tranoben'ny hatsaràna efa vasoka ireo làlana rarivato. Efa niala ankehitriny ireo olona izay nonina taloha tamin'io toerana io sy nitondra anjara asa tamin'ny toekarena voarindra fony Firaisana Sovietika, .
Ao anatin'ny tanàna haolo iray, Dzhantukha, miisy mponina manakaiky ny dimampolo eo. Ny 38 sasany monina ao Akarmara, miaraka amin'ireo tanàna hafa manana isa mitovitovy aminy. Ireo khrushchyovkas izay mbola ahitana fianakaviana iray na roa dia hamarinin'ny fisian'ny lamba mihahy eny an-davarangana.
Ankizy vavy kely roa, samy fito taona, no nitsirika avy tao am-baravarankelin'ny trano rava iray. Vao teo ampanomanana ny fakantsary teny an-tanako aho, nihodina nilefa avy hatrany izy ireo.
‘Tsy avelan'ny mamanay alaina sary izahay’, hoy ny iray tamin'izy ireo.
‘Tsy avelany, izay fotsiny’.
The girl whispers something to her friend and they abruptly exit the ruined building and disappear. …………Nitakoritsika tamin'ilay namany ilay zazavavikely sady niala haingana tao amin'ilay trano rava izy roa ary tsy hita intsony.
Miasa ho an'ny orinasa Tiorka kely iray mpitrandraka arintany, Tkuarchalugol, ny ankabetsahan'ny mponina eo amin'ny faritra. Ataon'ireo fianakaviana ihany koa ny fambolena ho fivelomana, ny fompiana biby fiompy, ny fiompiana tantely, ny fambolena legioma. Henjana vao mahavita volana iray. Rehefa ririnina, mamatsy maimaimpoana jiro jabora sy mofo ho an'ireo tanàna ny mpitantana ny distrika.
“Tsy haiko izay mbola hitranga, fa hamboly korzety aloha isika”
Teo ho eo amin'ny folo taona lasa teo, vavy antitra iray nantsoina hoe Galina, na Nenitoa Galya, araka izay fiantson'ireo manodidina azy, no niala tao Dzhantukha nankany Akarmara. Na teo aza ny zanany vavimatoa monina any Frantsa, tsy manana risi-po handao an'i Abkhazia mihintsy i Galina ka hiara-honina aminy. “Mitarika ahy ho any Abkhazia ny foko,” hoy izy.
Mandà ireo tolotra mikasika ny fanampiana ara-bola avy amin'ny zanany vavy i Galina, manitrikitrika fa aleony izy no manome ny zafikeliny madinika. Mitovy sanda amin'ny dolara sivy monja no vola fisotroan-dronono raisin'i Galina isambolana.
“Rehefa tsy manana zaridaina misy legioma sy trano iray ianao, tsy afa-miaina,” hoy izy miaiky.
Miteny i Nenitoa Galya fa miezaka mihaona matetika izy sy ireo mponina hafa ao an-tanàna ary miara-mankalaza ny fotoam-pialantsasatra.
“Vaviantitra iray 90-taona no monina ao amin'io tranobe io, tahaka ahy sy fianakaviana tanora iray. Rehefa misy fotoana fialantsasatra, mifampitsidika izahay. Saingy tsy matetika – samy sahirana amin'ny raharahany ny tsirairay.”
Teo ampiresahana izy no nivoaka teo an-davarangana ny tanora iray mpifanolo-bodirindrina aminy.
“Natasha”, hoy i Nenitoa Galya niantso mafy. “Nolazaindry zareo fa afaka mamboly korzety isika. Efa nomaniko ny tany. Tsy fantatro izay hitranga, fa hamboly korzety isika.”
‘Efa zatra amin'ny zavatra rehetra ny olona’
Natasha, ilay nifampiresaka tamin'i Galya, niara-nipetraka tamin'ny tranony niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany dimy nandritra ny fotoana maro. 11 taona i Natasha raha nanomboka ny ady. Isanandro izy mahatsiaro hatrany ny fiainan'ny tanàna talohan'ny ady.
Na teo aza ny fanànana ray amandreny monina any Rosia afovoany, Ossetia, sy Zeorzia — firenena izay nisintahan'i Abkhazia — tsy nanana fahafahana handeha izy ireo.
“Vao haingna izahay no nividy tany tao Sukhumi (renivohim-pitantanana an'i Abkhazia). Te-hanorina trano any izahay, nefa tsy ho tanteraka vetivety izany,” hoy izy nalahelo.
Mandray volan-jaza manodidina ny 9 dolara isaky ny ankizy i Natasha. Miasa ao amin'ny fitrandrahana arintany ny vadiny. Manana toeram-pambolena azy manokana ilay fianakaviana tanora. Eo akaikin'ny trano, izay nisy ny sekolin'ny garabola nalehan'i Natasha fony mbola zaza, miandry kisoa, omby, akoholahy sy akohovavy eo ry zareo.
Milaza izy fa rehefa nanomboka nandao ny tanàna ny mponina taorian'ny ady, nampatahotra izany tamin'ny voalohany. Saingy nihalefy tsikelikely izany tahotra izany rehefa nandeha ny fotoana.
“Tsy matahotra ny haizina eny an-dàlana na ny tsy fisian'ny olona [intsony] izahay. Afaka mizatra amin'ny zava-drehetra ny olona. Maro ny olona no mieritreritra fa rava vokatry ny ady ireo tranobe ireo. Ny tena marina, vokatry ny fandrobàna avokoa ireo. Tsy nisy asa mihintsy taorian'ny ady ary nonina teny amin'izay nampety azy teny ny tsirairay. Isanandro, tsaroako foana hoe toy ny ahoana io tanàna io, sy ny ady. “
Nony efa nadiva hifarana ny resakay, tovolahikely iray no indro nihazakazaka. Mihazakazaka mitsofoka ny varavarankelin'ny tranobe rava iray izy sady miafina. Misidina mivaoak avy eo am-baravarankely ny baolina iray ary mihazakazaka eo aoriany ny zazalahy iray hafa. Dakàny ilay baolina dia mikodiadia ery aminìny havoana.
Andian'ankizy no manenjika ilay baolina avy eo, mihiakiaka ny maro amin'izy ireo. Rehefa mihazakazaka izy ireo, ny sasany manangom-bato sady mitoraka an'ireo tranobe rava. Ampahany amin'ny fahazazàn-dry zareo ireo faharavàna ireo, izay toy ny tsy mivaky loha sahala amin'ny hafa. Tsy mbola nahalala zavatra hafa mihintsy izy ireo.
Teny nampiasain'ny mpanoratra irery ireo anarana toerana sy voambolana nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, ary tsy voatery maneho ireo fomba fijerin'ny kaomitin'ny famoaan-dahatsoratry ny OC Media.